TOP DHAGAYSO : Dawlada Federalka Soomaaliya oo Heshiisyo Hordhac Ka Gaartay Dagaalkii Beledweyne | Monday, June 26th, 2017	Home
TOP DHAGAYSO : Dawlada Federalka Soomaaliya oo Heshiisyo Hordhac Ka Gaartay Dagaalkii Beledweyne
Dec 19, 2015 - jawaab	Heshiis ka kooban lix Qodob ayaa la kala dhex dhigay Dhinacyadii ku dagaalamay Magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan, kadib markii Odayaasha Labada Dhinac shalay la isugu keenay Kulan ka dhacay magaalada.
Heshiiskaan waxaa Garwadeen ka aheyd Dowladda Federalka Somaliya, waxaana Odayaasha labada dhinac ay ku qanceen heshiiska oo ay Saxiixeen.
Wasiirka Amniga Gudaha C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa sheegay muhiimada inay tahay nabad inay ku noolaadaan Bulshada Gobolka Hiiraan degta oo aanan dushooda lagu dagaalamin.
Odayaasha Labada Dhinac ee Heshiiska saxiixay, ayaa balan qaaday dhaqangelinta Heshiiskaan si uusan u soo noqon dagaal dambe oo dhiig ku daata.
Dadka Magaalada Baledweyne ayaa ku farxay heshiiskaan oo soo dhaweeyay.
Heshiiskaan ayaa waxaa Beesha Jajeele u saxiixay, Xaaji Maxamed Goosaar Guure, halka Beesha Gaaljecel uu u saxiixay, Nabadoon Cumar C/llaahi Cali.
1. Dhaqan-gelinta iyo adkeynta xabad-joojintii ay kala saxiixdeen labada beelood 15-Dec-2015. Iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo keeni kara colaad dambe – Af iyo Adinba.
2. In dhammaan goobihii dagaalladu ka dhaceen ay ahaadaan kuwa ka caagan wax dhaq-dhaqaaq ciidan ah. Mas’uuliyadda Ammaanka looga dambeeyo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
3. Inay ballan-qaadayaan cuqaasha iyo mas’uuliyiinta labada beeloodba inay ilaalinayaan amniga iyo xasiloonida magaalada, wixii labada beelood dhexdooda ahna loo saarayo gudi soo baara kaddibna xal ka gaara. Guddigaasna waxaa xubno ka noqon doona: Odoyaasha dhaqanka labada beelood iyo odoyaasha dhaqanka reer Hiiraan.
4. Wixii tabasho siyaasadeed ah ee ay qabaan Beelaha reer Hiiraan waa in loo maraa wada sharci ah. Dowlada Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay wax ka qabashada wixii tabasho maamul ah ee ay qabaan beelaha reer Hiiraan.
5. Cid kasta oo loo arko inay caqabad ku tahay dhaqan-gelinta heshiiskaan tillaabo sharci ah ayaa laga qaadi doonaa. Waxaa mas’uuliyada dhaqangelinta heshiiskaan mas’uul ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo is-kaashanaya.
6. Heshiiskaan wuxuu dhaqan-galayaa marka la saxiixo.
GOOB-JOOGE; Taliyaha ciidanka Jabuuti ee gobolka Hiraan Col Osman Dubad Sugulle.
DAMAANAD-QAADE: Wasiirka Amniga Gudaha Somalia, C/risaaq Cumar Maxamed.